Khabiirka ciyaaraha Mark Lawrenson ayaa saadaaliyay
Manchester United ayaa badali doonta hogaanka Liverpool ee hogaanka Premier League hadii ay garaacaan Burnley habeenka talaadada, laakiin tababare Ole Gunnar Solskjär ayaa isha ku heyn doona kulanka axada ee Anfield?
Su’aashan ayaa fure u ah saadaasha khabiirka ciyaaraha Mark Lawrenson ee kulamada usbuucan, kuwaas oo ah kulamada u haray kooxaha qaar.
“Manchester United waxay leedahay kulan weyn isbuucaan, laakiin ma jirto sabab loo bilaabo in laga fikiro Liverpool, haddii ay sidaas sameysana Burnley ayaa guuleysan doonta”. Taasi waa sida uu sheegayo tababaraha BBC Sports Mark Lawrenson, oo saadaaliyay kulamada Premier League ee Talaadada, Arbacada iyo Khamiista.
Mark Lawrenson oo si joogto ah u saadaaliya kulamada Premier League ayaa saadaalin doona 380 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan taas oo la macno ah in uu sii wadi doono saadaashiisa ilaa maalinta ugu dambaysa.
Sida laga soo xigtay Mark Lawrenson, Manchester United ayaa seddex dhibcood ka hooseysa Liverpool oo hogaanka heysa, Red Devils ayaana labo gool ku hogaamin doonta hogaanka horyaalka.
Manchester City ayaa garaaci doonta Brighton & Hove Albion, halka Tottenham ay seddex dhibcood ka sarreyso Fulham kulan dib loo dhigay bisha December.
Everton ayaa heli doonta dharbaaxo kale marka ay u safraan Wolves habeenka talaadada waxaana laga badinayaa 2-1, sida uu sheegay khabiirka.
Farxada ugu weyn ee Lawro ayaa ah in Sheffield United, oo aan guuleysan xilli ciyaareedkaan oo dhan, ay hesho seddexdii dhibcood ee ugu horeysay.
Khabiirka Mark Lawrenson saadaashiisa kulamada todobaadkan
Sheffield United 2-1 Newcaslte United
WAR DEG DEG AH: Premier League ayaa shaaciyay nambarada